Bezihlangene izintombi zas’Ogwini | News24
Bezihlangene izintombi zas’Ogwini
Bebevunule beconsa omama abebehambisana nezintombi emhlanganweni.x
BEZIPHUME ngobuningi bazo izintombi zas’Ogwini emhlanganweni wazo obubanjwe ehholo lomphakathi eMargate emasontweni amabili edlule.
“Lomhlangano ubuhlelwe uMnyango wezaMasiko Nobuciko ngaphansi kohlelo lukahulumeni oluhlose ukukhuthaza kanye nokugujwa kwendumezulu yomcimbi woMkhosi womhlanga,” kusho umphathi wasemnyangweni uThembi Khawula.
Uthe lomhlangano unike ithuba lokuthi kuhlelelwe umcimbi ozobe ubanjwe kumasipala waseziNqoleni kwaziwe futhi nokuthi ngobani abazophumelela nabangeke bakwazi.
Phakathi kwezikhulumi zosuku bekhukhona abasuka eMnyangweni wezeMpilo, uhlaka lwentsha olungaphansi kukamasiphala iHibiscus Coast, South Coast Tourism, kanye noMnyango i-Department of Corporate Governance and Traditional Affairs (COGTA). Lezikhulumi zikhulume kakhulu nezintombi ngokuziphatha kahle ukuze zivikeleke ezifweni ezifana nesandulela ngculazi nokukhulelwa.
uPhumlani Mzobe ophethe uhlaka lwentsha eHibiscus Coast uthe ukwazi amasiko kumele kuhambisane nokuzimisela nasesikoleni.
Uphinde wagqugquzela izintombi ukuthi zijwayelane nehhovisi lentsha ukuze zithole usizo nolwazi mayelana nezinhlelo zentsha nokuthi zisizakale ekutheni zikhethe muphi umkhakha kwezomsebenzi